Wararka Maanta: Talaado, Oct 30, 2012-Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka sida ee Dowladda Soomaaliya oo Xukunno ku Ridday Eedeysanayaal
Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka sida ee Dowladda Soomaaliya oo Xukunno ku Ridday Eedeysanayaal Talaado, Oktoobar 30, 2012 (HOL) — Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa xabsi ku xukuntay eedeysanayaan la sheegay inay ka tirsanaayeen Xarakada Al-shabaab kuwaasoo ay howgallo kusoo qabqabteen ciidamada ammaanka Soomaaliya, iyadoo sii daysay kuwo kale oo eedeymihii loo haystay lagu waayay.
Xukunkan maxkamadeed oo ka dhacay xabsiga dhexe ee Muqdisho (Gaalshire) ayaa waxaa maxkamadda lagu horkeenay sagaal eedeysane oo muddo ku xirnaa xabsiga dhexe loona haystay inay ka tirsanaayeenXarakada Al-shabaab.
Garsoorihii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Soomaaliya ayaa markii uu dhageystay dacwooyinka lagu soo oogay eedeysanayaashan wuxuu ku dhawaaqay xukunka maxkamadda isagoo sheegay in afar eedeysane oo ka mid ahaa kuwii lagu soo oogay dambiyada lagu helay dambiyadii ayna maxkamaddu ku xukuntay min shan sanadood oo xabsi ciidan ah.
Eedeysanayaasha ay maxkamadda ciidamadu xukuntay oo da'doodu ka hosaysay 25-sano ayaa waxay magacyadoodu kala yihiin:
1. Ducaale Bashiir Cabdi2. Xuseen Axmed Xasan3. Maxamed-deeq Mukhtaar Ibraahim4. Bashiir Cusmaan Maxamuud
Sidoo kale, garsooruhu wuxuu sheegay in shan ka mid ah eedeysanayaashii lasoo eedeeyay lagu waayay dambiyadii loo haystay sidaa daraadeedna ya maxkamaddu sii daysay, kuwaasoo uu ku jiray wiil aan weli qaan-gaarin, waxayna magacyadoodu kala yihiin:
1. Cismaan Muuse Maxamed2. Cabdulfataax Maxamuud Maxamed3. Cabdulqaaliq Cabdulqaadir Cabdiraxmaan4. Buufeey Cali Xasan5. Maxamed Abshir Weheliye
Xukunkan ay ridday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay oo ay maxkamaddu riddo tan iyo markii ay Soomaaliya ka baxday xilliga KMG ah oo laba bilood laga joogo.
Talaado, Oktoobar 30, 2012 (HOL) — Dowladda wadanka Kenya ayaa ugu baaqday Dowladda Ereteria in ay taageerto Nabadda Geeska Afrika, kadib kulan ay isugu yimaadeen madaxweeynaha dalka Kenya iyo safiirka dowladda Ereteria u fadhiya dalka Kenya Beyene Russom. Kooxo hubeysan oo xalay siyaabo kala duwan laba qof oo uu ku jiro Abwaan ugu dilay Degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir 10/30/2012 3:35 AM EST